လာဘ်လာဘပေါများ ငွေဒလဟောဝင် စီးပွားတက်စေတဲ့ ရေလုံငွေထုပ် ယတြာ
လူတိုင်းဟာ ချမ်းသာချင်ကြပါတယ်…ဒါအမှန်တရားပါ…ချမ်းသာမှ မိသားစုထောက်ပံ့နိုင်မယ် ..လှူနိုင်တန်းနိုင်မယ်လေ…. တချို့က ငွေတွေဒလဟောရပေမဲ့ ရသမျှငွေတွေက ဘယ်လိုကုန်လို့ ကုန်မှန်းမသိ ပြန်ကုန်နေတတ်ကြပါတယ်…
ဒါ့အပြင် စီးပွားရေးရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ရာမှာလည်း လာဘ်ပိတ်ပြီး လုပ်သမျှအဆင်မပြေ အရောင်းအဝယ်ကလည်း ပါးနေတယ်ဆို အောက်မှာ လာဘ်ပွင့်ပြီး ငွေတွေ ဒလဟောရစေတဲ့ ယတြာလေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… ယုံကြည်မှ လုပ်ပါ…..
“ငွေ ၅၀ တန် သို့မဟုတ် ၅၀၀ တန် သို့မဟုတ် ၅ ထောင်ကျပ်တန် ကို ခေါက်ပါ ပလတ်စတစ်အိပ် သန့်ထဲထည့် ပြီး ပိတ်ပါ ။နောက်ထပ် ပလတ်စတစ်အိပ် ထဲကို ထည့် ပြီး ရေ အနည်းငယ် ဖြည့်ပါ ။ အိတ်ကို သားရေ ကွင်း နဲ့ စည်းပါ ။ စတင် ပြု လုပ် ရမည့် အချိန်ကတော့ နံနက် ၅ နာ ရီ ၄၅ မိနစ် ဖြစ်ပါတယ်….
ဒီငွေအိတ်လေးကို မိမိ ငွေတွေထား တဲ့ ငွေသေတ္တာထဲ သို့မဟုတ် ဆိုင်ကောင်တာ တွေ ပေါ်မှာထားပါ၊…ရေကို တော့ တစ်ပတ် တစ်ခါလောက် လဲပေးပါ၊ လက်တွေ့သင့်အ တွက် အကျိူး ပေးပါလိမ့်မည် …”
တကယ်လို့သာ ရသမျှငွေပြန်ထွက်နေပြီး..ဆိုင်ကလည်းရောင်းမကောင်းကြဘူးဆိုရင် အပေါ်ကနည်းလမ်းလေးအတိုင်း ယတြာချေကြည့်ဖို့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ….အားလုံးပဲ စီးပွားလာဘ်လာဘတွေတိုးပွားပြီး လှူနိုင်တန်းနိုင်ကြပါစေနော်…..ဒီအစီအရင်လေးကိုလည်း ပြန်လည် Share ထားပြီး လိုတဲ့အချိန် ပြုလုပ်ကြည့်ကြပါနော်…
Source ; ဒေါ်သဇင်ထွန်း ဗေဒင်နှင့် ယတြာ